Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, uhlalutyo kunye nokulinganisa (2/3) -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, uhlalutyo kunye nokulinganisa (2/3)
I-Creo Parametric uyilo, imveliso kunye nobunjineli besoftware yePTC Corporation. Yisoftware evumela ukumodareyitha, ifotoreoreism, oopopayi abayilayo, ukutshintshiselana ngedatha, phakathi kwezinye iipropathi ezenza ukuba ithandwe kakhulu phakathi kwabaqulunqi boomatshini kunye nezinye iingcali.
I-AulaGEO iveza le khosi iphambili yemodeli ye-3D esebenzisa imiyalelo yeCro Parametric ephambili. Kuyo, imiyalelo ichazwe ngokweenkcukacha kwaye iprojekthi ebonakalayo iya kwenziwa ukomeleza ukufunda. Iifayile zoqheliso zibandakanyiwe kunye nemifanekiso enikezelweyo yesiphumo sokugqibela seprojekthi.
Imodeli ye3D kunye nendlela yokulinganisa
Ikhosi yokuHlela ividiyo kunye neNkulumbuso yeAdobe
Ikhosi ye-BIM - Indlela yokulungelelanisa ulwakhiwo